ဒေဝါလီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေဝါလီ သည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ မီးထွန်းပွဲတော် ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆောင်းဦးအချိန်တွင် ကျင်းပသည်။ ဒေဝါလီပွဲတော်သည် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ ပွဲတော်များထဲမှ အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ကျင်းပသည့် ကာလတွင် ဘုရားကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့် အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သည့် အဆောက်အအုံများတွင် မီးတို့ကို လှပစွာ ထွန်းကြသည်။ ပွဲတော်သည် ငါးရက်ကြာမြင်သည့်။ ဂရီဂိုးရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ ပွဲတော်သည် အောက်တိုဘာလလယ်နှင့် နိုဝင်ဘာလလယ်တို့တွင် ကျင်းပလေ့ ရှိသည်။များသောအားဖြင့်သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။
Rangoli decorations, made using colored powder or sand, are popular during Diwali.
ယဉ်ကျေးမှု, ရာသီအလိုက်, ဘာသာရေး
ပွဲတော်အတွက် မိမိတို့၏ နေအိမ်များ၊ အလုပ်နေရာများကို အလှဆင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့နောက်တွင် အကောင်းမွန်ဆုံး အဝတ်အစားတို့ကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အိမ်အတွင်းအပြင်တွင် ဖယောင်းတိုင်များ၊ ဆီမီးအိမ်များ စသည်တို့ကို အလှဆင်ကြပြီး ပုဂျ နှင့် လက္ခမီးတို့ကို အရိုအသေပေး ကြသည်။
↑ Charles M Townsend, TheOxford Handbook of Sikh Studies, Oxford University Press, ISBN 978-0199699308, p. 440
↑ The New Oxford Dictionary of English (1998) ISBN 0-19-861263-X. p. 540 "Diwali /dɪwɑːli/ (also Divali) nounaHindu festival with lights...".
↑ Vasudha Narayanan; Deborah Heiligman (2008)။ Celebrate Diwali။ National Geographic Society။ p. 31။ ISBN 978-1-4263-0291-6။ , Quote: "All the stories associated with Deepavali, however, speak of the joy connected with the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil".
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named htoday
↑ Frank Salamone (2004), Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals, ISBN 978-0415880916, Routledge, pp. 112–13, 174, 252
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named melton252
↑ Pramodkumar (March 2008)။ Meri Khoj Ek Bharat Ki။ ISBN 978-1-4357-1240-9။ 26 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ It is extremely important to keep the house spotlessly clean and pure on Diwali. The Goddess Lakshmi likes cleanliness, and she will visit the cleanest house first. Lamps are lit in the evening to welcome the goddess. They are believed to light up her path.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒေဝါလီ&oldid=560529" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။